Lo mculi omkhulu waseDashiya uVan Gogh .. Kuthetha ntoni ngaye malunga nanamhla. Ngokuphathelele ubomi bakhe, ukuzibulala, kodwa ininzi malunga nemifanekiso engayi kumshiya nabani na.
Into ephambili yeemephu zabaculi be-Impressionist yayimvelo. Kwaye ngokugqithiseleyo kwakuboniswe kuzo zonke iziphikisana kunye nokugqithisa kwimisebenzi yomculi omkhulu waseDutch uVangh.
UVincent van Gogh (1853 ukuya ku-1890), omnye wama-artists amakhulu amaDatshi, wayenempembelelo enamandla kakhulu kwi-impressionism kwimifanekiso
Xa uVan Gogh ejika iminyaka engama-27 ubudala, wagqiba ekubeni anikezele ubomi bakhe bonke ukupenda. "Andikwazi ukubonisa indlela endivuyo ngayo kukuba ndiqalise ukudweba kwakhona, ndandisoloko ndicinga ngako, kodwa ndacinga ukuba ukudweba kwakungenakukwazi kwam."
UVan Gogh abaninzi abaphandi bacinga ukuba bazifundise, nakuba, ngenxa yobulungisa, kufuneka kuthiwa wathatha izifundo ezivela ku-A. Mauve.
Ngo-1886, uVan Gogh wagqibela ekufudukela eParis. Ukufika kwinqununu yaseFransi kwanditshintsha kancane isimbo se-maestro. Wayeva novelwano kunye nothando kumntu omncinci, kodwa lo mlingiswa uhlukile-ohlala kwisixeko esikhulu saseFransi, umdali ngokwakhe.
Ukufika eParis kwatshintsha umbono wezobugcisa behlabathi. Ubonakala sele evuya kwaye eqaqambileyo. UVan Gogh ubamba iingqungquthela zaseMontart, iibhuloho ze-Seine, ii -aters, kunye neyona nto ibaluleke kakhulu, uzive engumFrentshi. UVan Gogh wayehlala efuna ingqalelo yokukhanya kunye nombala, kodwa e-gray Paris wayengenakuyenza. Emva koko wagqiba kwelokuhamba ezantsi. Kukho apho ixesha elitsha liqala emsebenzini wakhe. Lapha wabona ukuba akukho mmahluko phakathi kwakhe nomcebisi wakhe, uRebrandt.
UVan Gogh ubonakala engenakwenzeka, uphelele. "Umyalelo onqabileyo" awunakwenzeka ukuba ucinge ekuhlaselweni. " UVan Gogh ungaphezu kobuvakalisi, kuba uzama amaxesha amaninzi ukutshintsha ubuchule bakhe, kwanawo mfanekiso ofanayo. Emva kwakho konke, into ekhoyo kwinqwelo - into entsha, eyahlukileyo kwiimpawu kunye neempawu zayo, kwaye isandla somculi sikhawuleza ukuba sibonakalise zonke iinguqulelo. Into ephambili, ngokutsho kukaVan Gogh, kukusebenza ngokuphefumlelwa, okokuqala ngqondweni, ehlala ikhanya.
Ihlabathi lakhe lihlala liguqukayo, kumjikelezo ongunaphakade, ukukhula. Umsebenzi wezobugcisa ukuyiqonda ezi zinto kungekhona nje ngezinto ezingenanto, kodwa kunye neziganeko. UVan Gogh akafaneli umzuzu omnye, uthumela ukuqhubeka kwexesha, i-leitmotif yento yonke-ekukholeni kwayo. Ngoku siyazi ukuba kutheni isifundo seVan Gogh singesona sifundo, yinto ebonakalayo yonke into ebonisa izinto, iziganeko kunye nomntu ngokwakhe kwiqondo elingabonakaliyo. UVan Gogh akabonakali ilanga ngokwalo, kodwa iintolo zalo zemibala ejoliswe kumhlaba okanye indlela ilanga livuke ngayo kwaye liphuma kumfono wegolide.
Kuba uVan Gogh kuthathwa njengento engalunganga ukubonisa umthi njengoko kunjalo, kuba umbono wakhe umthi ungumzimba ofana nomntu, oko kuthetha ukuba ukhula kwaye ukhula njalo. Iipropresses zayo zinjengeetempile zamaGothi, ezichithwa esibhakabhakeni. Ukuqhaqhazwa ngumlilo ongapheliyo, ziphakama, njengezikhulu, iilwimi ezigubungelayo zomlilo oluhlaza, kwaye ukuba zihlambulukile, zitshisa emhlabathini njengemibhobho.
Ukuqonda indlela eguquguqukayo kaVan Gogh, umntu kufuneka abhekise kwiimpawu zakhe.
Umzobo we "I-Berceuse". Ichaza i-nanny yokuloba, ekuthi, njengabantu basemakhaya, baya kwiinqanawa ngokuhlwa, kwaye kwimozulu embi ichaza iindaba. Kuzo zonke ezi zinto zimele zibonakaliswe kwi-portrait kaVan Gogh - ibhinqa elimele libe ludaka, lingenanto, lidiniwe-njengokuba isithethi sakhe sithetha, kwaye ngexesha elifanayo lincomekayo-ngumgcini weenganekwane. Lo mfanekiso uVan Gogh wayeya kunika uSt. Marie - indawo yokukhusela yabanqwelisi ...
Masibuyele kwi-self-portrait yomculi. Nasi wabonakala phambi kwethu ngendlela esingakaze siyicinge ngayo. Ukukhathala, ukubonakalisa ubuso obusabekayo, njengemaski, phantsi kwelo lixesha lomoya ophelileyo.
UVan Gogh wayekholelwa ukuba ubuchule bokubonisa ubuchule budlala indima enkulu, kodwa into ebaluleke ngakumbi yokubonakalisa ukujonga imibala. Iipalati kwinkqubo yexabiso lomculi ayizange ibe yindumiso okanye indlela yokubonakalisa umlingisi ocacileyo. Iipalisi azidlala indima ebalulekileyo kunomfanekiso ngokwawo. Ngaphandle kwemibala ekhethiweyo ngokufanelekileyo akukho mfundiso, iifoto kunye nomlobi ngokwakhe.
Ngoko yonke imibala yeVan Gogh inentsingiselo ethile, imfihlelo, imfihlelo, leyo yena ngokwakhe engazange azichazele ngokupheleleyo. Emva koko, umfanekiso usehlabathini lonke elingaze liqondwe kwaye lichazwe. Kuwo onke amagama ombala, wakhetha uhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka.
Eyona ndlela inkulu kwiinkqubo zobuciko-mbala. Kwi-system yeVangh ephawulekayo, sibona iqoqo elipheleleyo lemibala ebonakalayo: isigqi, umbala, ukubunjwa, umgca, ukuma.
Imibala kaVan Gogh ayigcineli nje umsebenzi, ivakala. Iipayili zomsindo kunoma yiyiphi intonation ngaphezu kobude obubanzi beengxaki zemvakalelo, kwiintlungu ezibulalayo ukuya kwiintlobo ezahlukeneyo zovuyo. Iipalati kwipalet yeVan Gogh zihlulwe zibe zibini ezimbini. Kuye, kubanda nokufudumala-njengomthombo wobomi nokufa. Kwiintloko zale nkqubo - ophuzi kunye nohlaza okwesibhakabhaka, imibala yomibini inomfanekiso obunzulu obunzulu.
Umbala, umbala, okwenyaniso-yiloo nto uVanes Gogh.
Isiganeko esimangalisayo sikaGalina Bagirova
Ukutya kwiinkcukacha: i-sauce yamakhowa ukusuka kumagqabi kunye ne-ukhilimu
Isonka sesonka kwi-bread maker
Ionyango zonyango ekhaya
Ubomi bezinwele zekhaya
Iimayonnaise zenziwe kwiinqama zamaqanda
Ukukhupha isisu kuthintela njani impilo yowesifazane?
Iintlobo zemikhwa emibi
Izixhobo ze-TOP-4 ezongeza iminyaka: musa ukuphinda le mpazamo!
I-Royal Jelly: iipropati zonyango